द भ्वाइस अफ नेपालमा अाज गुन्जिनेछन् दीप | Makalukhabar.com
द भ्वाइस अफ नेपालमा अाज गुन्जिनेछन् दीप
मंसिर १५, काठमाडाैं । कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रशारित लाेकप्रिय रियालिटी शाे द भ्वाइस अफ नेपालकाे अाजकाे श्रृंखलामा टीम प्रमाेद र टीम दीपका प्रतिष्पर्धी विच प्रतिष्पर्धा हुँदैछ ।
प्रशारणमा अाएकाे छाेटाे समयमै सर्वत्र लोकप्रिय बनेकाे द भ्वाईस अफ नेपाल हरेक शनिबार र आइतबार कान्तिपुर टिभीमा साँझ ९ बजे प्रसारण हुँदै आएको छ ।
यस कार्यक्रम अहिले लाईभ राउण्डमा आइपुगेको छ । कतारमा हुने भनिएको ग्राण्ड फिनालेका लागि अब ४ वटै कोचहरुको समुहबाट उत्कृष्ट आवाजहरु छान्ने काम भइरहेको छ । अब सम्पूर्ण छनौटको अधिकार नेपाली जनताहरुलाई दिइएको छ ।
यस हप्ताको भ्वाइस अलि बिशेष रहने बतार्इएकाे छ । अाज आज सुरेखा श्रेत्री, सिडि बिजय अधिकारी, सृजय थपलिया र राजु तामाङको प्रस्तुति रहनेछ ।
यस हप्ता कोच दिपका लोकप्रिय गितहरु प्रस्तुत हुने बतार्इएकाे छ । भने, दीप सँगै अर्का निर्णायक प्रमोद खरेलले पनि अाफ्नाे प्रस्तुति रहनेछ । यसका अलावा लाेकप्रिय गायिका अञ्जु पन्तकाे समेत उपस्थिति रहने छ ।
लघुवित्त संस्थालाई नाफामुखी होइन सेवामुखी बनाऔँः प्रधानमन्त्री
‘दि भ्वाइस’को सिजन २ को अडिसन चैत १० मा सकिदैँ
अष्ट्रेलियामा नेपाली बिद्यार्थीले किन गर्छन आत्महत्या ? रहस्य यसरी देखाइयो गीतबाट (भिडियाे सहित)
चैत्र ३, काठमाडौं । अष्ट्रेलियामा रहेका सर्जक माधब न्यौपानेले ‘पागल पागल बनाई हिँडि’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाली लोक तथा दोहोरी सांगितिक दुनिँयामा सुमधूर आवाजबाट स्रोताहरुको मन जित्न सफल गायिका पुर्णकला बिसीसँग नवोदित गायक माधवले स्वर दिएका छन् । गीतको भिडि... जारी राख्नुहोस...
‘पुरानो बुलेट’ पूर्वेली शैली र परिवेशसँग साक्षात्कार
फिल्म फगत मनोरन्जन होइन, एक सांस्कृतिक उत्पादन हो । फिल्मले कुनैपनि क्षेत्रको रहनसहन, शैली, चालचलन, कला, संस्कृतिलाई आफुसँगै बोकेको हुन्छ । फिल्मको संवेदनशिलता पनि यसमै हुन्छ । फिल्मले कथा मात्र भन्ने होइन । फिल्मले मनोरञ्जन मात्र पेश गर्ने होइन । यसले कुनै खास भूगोल र क्षेत्रको कला–संस्कृत... जारी राख्नुहोस...
डियर लभको आयो यस्तो टिजर
चैत्र २, काठमाडौं । रुवुशा क्रिएटिभ वर्क्सको प्रस्तुति रहेको बहुप्रतिक्षित वेब सिरिज डियर लभको अफिसियल म्युजिकल्ली टिजर सार्वजनिक भएको छ । यस सिरिजमा विवेक रसाईलीको कथा तथा निर्देशन रहेको छ । प्रेम, रोमान्स र द्वन्द्वलाई समावेश गरिएको उक्त सिरिजमा दिप्सन भट्टराई र क... जारी राख्नुहोस...
आजबाट तीन चलचित्रको एकसाथ भिडन्त
चैत्र १, काठमाडौँ । हरेक हप्ताको शुक्रबार अर्थात सामान्य भाषामा चलचित्र क्षेत्रमा चलचित्र प्रदर्शनमा आउँने मिती भनेर बुझिन्छ । आजबाट तीन चलचित्र एकसाथ प्रदर्शनमा आएको छ । आजबाट प्रर्दशनमा आएको चलचित्रमा पुरानो बुलेट, जानी नजानी र द म्यान फ्रम काठमाडौं... जारी राख्नुहोस...
ट्रेन्डिङको शिर्ष स्थानमा पुग्यो भागिरथको जाउँला बरिलै
काठमाण्डौं, फाल्गुण ३०। लोकदोहरी गायक भागिरथ चलाउने र गायिका बिष्णु माझीको आवाज रहेको गित जाउँला बरिलै युबटुव ट्रेन्डिङको शिर्ष स्थानमा पुगेको छ ।अहिले पनि नेपाली समाजमा व्याप्त रहेको जातीय छुवाछुत र यहिं पिडा एवम् अवरोधका विचमा पलाएका प्रेम सम्... जारी राख्नुहोस...
विराटनगरमा यसपालिको होली ईन्दिरा जोशीसँग
यी हिराेबाट अक्षयलाई खतरा
फागुन २९ । पछिल्लो वर्ष बलिउडमा ठूला स्टारका सिनेमामा भन्दा दर्शकको रोजाइमा विषय प्रधान सिनेमा परे। दर्शकक... जारी राख्नुहोस...
आर्यान सिग्देललाई गालीको वर्षा !
फागुन २७, काठमाडौँ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रको चर्चित जोडी नायिका प्रियङ्का कार्की र नायक आयुष्मान देशराज जाेशी यतीबेला इन्डो... जारी राख्नुहोस...